Budata Quebec City 2.0 FSX & P3D - Rikoooo
downloads 23 917
Quebec obodo bụ isi obodo nke ógbè ndị Canada bụ Quebec. Hiwere na 1608, ọ bụ obodo kasị ochie na North America. Nke a ukwuu zuru ezu mma na-agụnye ihe karịrị 135 omenala ụlọ wuru n'oge ndị gara aga 3 afọ. Abịa ma na-ahụ ihe Quebec City anya amasị na ya si majors akara gị ụgbọ elu simulator.
Ọtụtụ ọhụrụ FSX/P3D ejirila njiri mara iji wuo ebe a dị egwu dịka ihe ngosi na mmetụ pụrụ iche nke omenala.
Ọdịnaya nke SECENERY 2.0:
Canadian Coast nche, Quebec obodo isi
Helipads A, B na C
- Ile d'Orléans akwa
- Québec akwa (na okporo ụzọ)
- Pierre-Laporte akwa
- Price ụlọ
- Hilton na Delta hotels
- Quebec nzuko omeiwu
- National Bank ụlọ
- SAAQ ụlọ
- Dufferin-Montmorency okporo ụzọ
- Ancienne-Lorette ụka
- Glaverbec osisi na mpio anwụrụ ọkụ (na akara na runway 06 na CYQB)
- Montmorency Falls park cable ụgbọ ala na mmiri
- Colisée Pepsi (Egwuregwu nke dị n'Ogige, ebe Quebec si Nordiques eji na-egwu)
- Quebec obodo ama ịgba ọsọ
- Ngosi Center (Centre de Foire)
- Ultramar refainari
- Petit-Champlain Condominiums na ụlọ
- Groupe Desgagnés ụlọ
- Port of Quebec ọka nchekwa ihe
- Levis ọnụ ugbo
- Québec ọnụ ugbo
- Electricity pylons nke L'Ånge-Gardien, Île d'Orléans na Beaumont
- Vieux-Port ahịa
- Le Riviera Restaurant (bassin Louise) Ski ntụrụndụ:
- Amundsen (Canadian Coast nche ice-emebi)
- Super tanka (Ultramar n'ọdụ ụgbọ mmiri)
- Boats na "Bassin Louise" marina
- Obodo Quebec na Levis ferries
- N'Ọzara Abraham
- Montmorency dara cable ụgbọ ala
USB ụgbọala ahụ na-esere na Montmorency dara.
- Loto-Québec firework zoo
Ezimezi oku ime kwa ụbọchị na July
na August si 9: 00pm ka 10: 00pm na-aga n'ihu.
- Egbe nke Dufferin Terrace
Ịme anwansị egbe-agba n'okpuru Dufferin Terrace.
The na-aga aga-adị maka 5 nkeji na oge awa na ọkara hour.
Ferries nwere, ndabara, static na idaha.
Ai version bụ dị na "Autres" folder.
Biko, ịhụ "Rịba ama maka ferries.txt" akwụkwọ maka ihe Ama.
Onye edemede: Jean St-Cyr